Soo dejisan WampServer 3.1.9 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: WampServer
WampServer – set ah software loogu talagalay horumarinta web. Walxaha of software ka mid ah qoraalkii ugu dambeeyey ee MySQL server database, Apache web server, af barnaamijyada PHP oo lagu daro kale. WampServer awood u tahay in la abuuro server degdeg ah web kuu ogolaanaya inaad si ay u abuuraan bogga web yar ama goobaha dhamaystiran. Sidoo kale WampServer ku siinayaan shaqada ee codsiga web PHPMyAdmin ay howshu ka badan fudud oo kaydadka. WampServer awood u tahay in la beddelo version iyo maamulo saldhigyo MySQL ama Apache, edit faylasha qaabeynta, beddelaan server u dhexeeya online iyo offline hababka. Maamulka ee server ah iyo adeegyada kala duwan ee software waxaa la sameeyaa iyadoo la isticmaalayo menu macnaha in uu ku yaalaa on Taskbar ka.
Waxay abuurtaa dhamaystiran web server ah
Set ah lagu daro u tahay horumarka web Great
The fursadaha ballaaran reserved server
Soo dejisan WampServer
Faallo ku saabsan WampServer
WampServer Xirfadaha la xiriira